R-4608 Huru Dzese Terrain Wheels Kufamba Rubatsiro - Karman Healthcare
Yakakura iri nani! Asina kutara machena matai ekushandisa kukuru mumba kana kunze. Iyo R-4608 ichasangana nezvose zvaunoda uine tarisiro yekukwanisika uye kugadzikana. Iyo R-4608 inoratidzira zviri nyore kushandisa ergonomic ruoko mabhureki uye kupeta kuri nyore kwekuchengetedza nekutakura. R-4608 rollator inopa maneuverability yakakura uye kugadzikana, uye kukwirira kuchinjika kune iko kukodzera chete, inouya nemaviri mavara, burgundy uye nebhuruu. Usadonhedze "anodhura" mabheyaringi uye matema epurasitiki matai anowanikwa nevamwe vanogururudza. Tora mhando uye yakavakirwa zvakanaka ma rollers anomira muyedzo wenguva.
R-4608 - 15 lbs huwandu
SKU: R-4608 Category: Vanotenderera Tags: 4 mavhiri, 4608, r-4608
Kureba kunogadzirisika, kubata-ruoko nemabhureki ekusundira-pasi pa (4) 8 "casters
Kurema w / tswanda ndeye 21 lbs
Chigaro Pad Upamhi 13.5 padiki.
Kureba Kumashure 11 padiki.
Kurema Pasina Riggings 15 lbs.
Kutumira Kukura 25, L x 36, H x 10, W
25 × 10 × 36 mukati